हालै म चिरपरिचित रूसी ब्लगर Aleksandr Gorny धेरै, धेरै चिरपरिचित विरोध वेबसाइट "मास्को को इको" नाम amauntain अन्तर्गत यसको टिप्पणीहरू र विचार को लागि प्रसिद्ध पाए। साथै, यो टिप्पणी "प्रत्यक्ष जर्नल» (लाइव जर्नल) मा पाउन सकिन्छ नाम gornyi अन्तर्गत।
ब्लग के हो र ब्लगर्स?
शब्द "ब्लग" को अंग्रेजी वाक्यांश वेब लग देखि उधारो छ। यो आगन्तुक प्रत्येक पक्ष को रेकर्ड थाह प्राप्त र एउटा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ इन्टरनेट, मा अनलाइन डायरी एक प्रकारको सङ्केत गर्छ। ब्लग - आफ्नो मालिक को आफ्नो व्यक्तिगत रेकर्ड कायम कि साधारण साइटहरु को थोक छ। के? ब्लग विषयहरू एक किसिम मा कायम गर्न सकिन्छ। यस्तो अनलाइन डायरी संग मान्छे, नियमित रेकर्ड, भनिन्छ ब्लगर्स थप्छ।
त्यहाँ एक मान्छे हो
वास्तवमा, Aleksandr Gorny - यो सिर्फ एक उपनाम हो। धेरै ब्लगर्स प्रकाशित प्रविष्टिहरू आफ्नो वास्तविक नाम अन्तर्गत छैनन्। वास्तविक जीवनमा, आफ्नो नाम Aleksandr Gennadevich Sergeev छ। उहाँले निश्चित लागि pseudonym, लिए किन, कुनै एक थाह छ। ब्लगर - तर सबैले कि अलेक्जेन्डर खनन थाह छ। जीवनी साशा पनि एक पहेली छ। तर केही जानकारी ज्ञात छ। उहाँले 21 मार्च, 1980 जन्म भएको थियो। हाम्रो नायक विवाहित छ।
वेब मात्र उहाँले मास्को देखि एक ब्लगर थियो र आफूलाई क्रिमीआ को नागरिक सम्पत्तिको प्रतिनिधिको विचार भनेर चिनिन्छ। Sasha सक्रिय नागरिक स्थिति छ र Koktebel को शहर को सार्वजनिक तर्फबाट कार्य। साइट "मास्को को इको" एक एकदम सुक्खा जानकारी बायाँ अलेक्जेन्डर: ब्लग, 2014 देखि छ निवास शहर - सिम्फरोपोल, पेशा - ब्लगर।
अलेक्जेन्डर के भन्छ?
लगभग सबै टिप्पणीहरू साशा को क्रिमीआ समर्पित। जानिन्छ, 2014 मा, प्रायद्वीप रूस भाग भयो। यो घटना रूस र युक्रेनमा दुवै धेरै नजिक ध्यान देखि छ। अब रूसी प्रायद्वीप र Aleksandr Gorny बासिन्दाहरू को समस्या indifferent रहने छैन। क्रिमीआ र दैनिक मानिसहरूले उहाँको लेखोटहरूमा लगभग दैनिक विशेषताहरू।
पत्र साशा अद्वितीय शैली। उहाँले मानसिक सधैं उहाँलाई लेख्छन् छ रूस को राष्ट्रपति पुटिन यसको संवाद आयोजित हुन देखिन्थ्यो। व्लादिमीर Vladimirovich - हामी एक ब्लग पाठक गर्न लेख सबै समर्पित छन् भनेर भन्न सकिन्छ। यदि पनि पुटिन उल्लेख थिएन, सबै पाठकहरूलाई त्यो चाहनुभएको कि अनुमान, वा कम से कम गर्न सक्नुहुन्छ Sergey Aksenov।
Crimea मा वास्तविक-जीवन bureaucratic arbitrariness आइपर्दा ब्लगर Aleksandr Gorny, लेख मा प्रस्तुत छ फोटो जो, म केहि शैली आफ्नो नोट लेखेर को परिवर्तन गरेका छन्। तिनीहरूले भनिने छेड्नु एक पत्र देखे यो पाठकहरूलाई विशेष गरी स्पष्ट भए "पुटिन, हामी क्रिमीआ गुमाउन!"
Aleksandr Gorny। "मास्को को इको"
पहिले उल्लेख रूपमा, अलेक्जेन्डर विरोध वेबसाइट "मास्को को इको" मा आफ्नो ब्लग जान्छ। यदि एक वर्ष पहिले, उहाँले सक्रिय क्रिमीआ को annexation रूस गर्न, समर्थित स्थानीय बासिन्दा को जीवन मा भयो परिवर्तनहरू प्रशंसा, तर हालै आफ्नो नोट को टोन एकदम परिवर्तन भयो। उहाँले अक्सर स्थानीय अधिकारीहरु र राज्य सडक को आफ्नो आलोचना तल ल्याउन।
Aleksandr Gorny Feodosiya सिम्फरोपोल (यसलाई 110 किलोमिटर) बाट जाँदा,2घण्टा यात्रा3emergencies आए। उहाँले आफ्नो नोट मा टिप्पणी रूपमा, यो तथ्य पनि उसलाई कसम गरे। र थकित पर्यटकहरु कसरी यी गड्ढे आफ्नो कार मा rutted सडक प्लाई, र एक उपलब्धि मा लगे भएकाहरूलाई को ठेगाना उनीहरूसँग कस्तो श्राप सुने गर्न सकिन्छ?
Sasha obmateril "Stophama" सिम्फरोपोल मा कार्यकर्ता
सिम्फरोपोल मा, साशा एउटा सानो घटना भएको थियो। उहाँले आन्दोलन "StopHam" को कार्यकर्ता संग एक स्किर्मिस गरे। हाम्रो नायक मन्त्रीहरु को परिषद निर्माण मा आफ्नो कार बीएमडब्ल्यू पार्क थियो। जब कार्यकर्ता अलेक्जेन्डर सोधे तिनीहरूले बस अशिष्ट, र यो आफ्नो अनुरोध outraged देखि obmateril हो कि, फरक स्थानमा कार पुनःव्यवस्थित गर्न। यो आन्दोलन सदस्यहरू सुरुमा लाग्यो यो Sebastopol व्लादिमीर Struchkov को एक पूर्व सदस्य थिए। तर बाद घटना कुनै पनि संलग्नता अस्वीकार गरियो। उहाँले यस्तो कार छैन भन्दै यस बताए। घटनाको भिडियोमा कार्यकर्ता द्वारा खिच्नुभयो र इन्टरनेटमा पोस्ट भएको थियो।
पछि, pseudonym अलेक्जेन्डर खनन अन्तर्गत एक ब्लगर को brawl आफ्नो संलग्नता स्वीकारे र यी कार्यकर्ता पनि द्वन्द्व आफूलाई सुनेपछि कि उल्लेख गरे। एउटा भिडियो अपूर्ण, केवल यसलाई लेखन टुक्रा छ।
पर्यावरण को क्राइमन मंत्रालय शान्त र फक्स खाडी र Atlesh को उपलब्धि व्यवस्थापन गर्न जारी हुनेछ जो कम्पनी, को चयन को लागि एक कोमल पकड गर्ने योजना बनाए। अलेक्जेन्डर अनुसार, व्यावसायिक संरचना को यो गतिविधि बिस्तारै अद्वितीय प्रकृति र मनोरंजन क्षेत्रमा नष्ट हुनेछ। र यो एक उचित निष्कर्षमा छ। उहाँले क्रिमीआ को क्षेत्र मा व्यावसायिक संरचना को चासो अग्रिम मा पारिस्थितिकीय Gennady Naraeva को मन्त्री आरोप लगाए। खानी हप्ताको समयमा सेवकाईमा आए र Naraeva र आफ्नो subordinates को जानकारी कोमल को आचरण स्थानीय जनसंख्या र सार्वजनिक को एक विस्तृत विरोध कारण मात्र होइन भौतिक क्षति हुनेछ, तर पनि बताए। प्रतिक्रिया, अलेक्जेन्डर र Koktebel समुदाय यस विषयमा आत्म-ब्याज आरोप लगाए। पर्वतमा मा क्राइमन मिडिया मा फोहोर झूट पोखे। यो ब्लगर आफ्नो सम्मान, मर्यादा र व्यापार प्रतिष्ठा सुरक्षाको लागि Gennady Naraeva मुद्दा हाल्न तत्परता घोषणा गरेको छ। के यी कार्यहरू ल्याए?
श्री नारा अदालत मा प्रसिद्ध ब्लगर संग पूरा गर्न तयार छ। तर त्यो पनि प्रत्येक व्यक्ति एक जीवनी, व्यक्तिगत कुरा, डिप्लोमा, राहदानी र चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रतिलिपि छ औंल्याए। यी विषयमा जानकारी सरकार पोर्टल र मानवअधिकार विभाग छ। Aleksandr - तर आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको मा, उहाँले उपनाम र निवास स्थान भन्दा अन्य केहि थाहा छैन Gorny (क्रिमीआ)। यो मानिसको जीवनी, पनि, कसैले थाह छ। भविष्यमा यसको गतिविधिहरु मा धेरै औपचारिक अनुरोध गर्न हुनेछ, किनभने आफ्नो नाम, उहाँले काम गर्दछ जहाँ: Gennady Naraevu आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको बारेमा व्यक्तिगत जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ।
के युक्रेनी मिडिया लेख्न?
पछि रूस गर्न प्रायद्वीप सामेल एकदम निराशावादी र depressing नोट क्रिमीआ र त्यहाँका बासिन्दाहरूले जीवन बारेमा युक्रेनी मिडिया गर्न उल्लेख गर्नुपर्छ। विशेष, यो कारण आफ्नो नोट एक प्रसिद्ध ब्लगर मा मुड को परिवर्तन भएको थियो। ukrosmi को क्रिमीआ देखि "प्रो-पुटिन ब्लगर" भने जस्तै, त्यो प्रायद्वीप रूसी जीवन को "annexation" त्यहाँ पछि हरेक दिन बढ्दै छ भनेर भन्नुभयो। यो Aleksandr Gorny, कडा 2014 को घटना आफ्नो रेकर्ड मा, ostensibly को प्रायद्वीप मा आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेर पहिचान समर्थन रिपोर्ट छ। मानिन्छ खाना र रक्सी को मूल्य यस कारण, धेरै पटक द्वारा बढ गई छ, बेरोजगारी र फेरि पर्यटकहरु, साथै पछिल्लो सिजन देख्न हुनेछ क्रिमीआ। पर्वतमा अनुसार, "पर्यटक भीडलाई को कथा" विशेष स्थानीय अधिकारीहरूले द्वारा आविष्कार। तिनीहरूले मास्को को बजेट दस्तक गर्न यो।
युक्रेनी मिडिया पनि माथि स्थानीय अधिकारीहरु संग अलेक्जेन्डर घर्षण छानिएको र उहाँले अधिकारीहरु संग धेरै दुखी छ र लगातार क्राइमन प्रशासन को काम criticizes कि यस्तो प्रकाश मा जानकारी प्रस्तुत।
अलेक्जेन्डर पहाड मेयर Koktebel को पोस्ट प्रस्ताव
Sasha मेयर Koktebel को पोस्ट को लागि प्रतियोगिता मा भाग लिन एउटा प्रस्ताव प्राप्त भयो। यो Feodosia Stanislava Krysina को प्रशासन को टाउको द्वारा व्यक्तिगत पाए। को ब्लगर अनुसार, Koktebel मा, त्यो 8 वर्ष पहिले, यो धेरै राम्रो तरिकाले थाह छ त आए, र गाउँमा नै, र यसको समस्या। तर, दुर्भाग्य, त्यो यस्तो ठूलो जिम्मेवारी लिनु डर छ। ब्लगर Aleksandr Gorny विश्वास गर्छ सम्झैताको कि - कुनै पनि मेयर लागि मृत्यु। हामी Koktebel को अघिल्लो नेताहरूको गतिविधि विश्लेषण भने, त्यसपछि सबै एक unenviable र कहिलेकाहीं दुःखद भाग्य भोगे। एक घूस लागि लगाए, अन्य एक Serpentarium मा पायो, राजीनामा निर्णय गरेको छ, तेस्रो फेरि लगाए फाँसी फेला परेन, चौथो। यहाँ एक उहाँले छ, यो लेखको protagonist - Aleksandr Gorny! आफ्नो अन्तिम वर्ष को जीवनी, हुनत सानो जानिन्छ, तर वर्तमान समय मा धेरै घटनापूर्ण छ।
एक र सबै एकैचोटि: कसरी "विक" मा गीतहरू मेटाउन। तपाईं समस्या छ भने के गर्न
गर्जनका एक ध्वनि: तपाईंको पृष्ठ निलम्बित छ
मा रूसी भाषा nouns को विचलन कसरी निर्धारण
खरबुजा sorbet। नुस्खा सारा महाराज र सिफारिसहरू
नासपाती शैक्षिक: विवरण, फोटो, समीक्षा र सुविधाहरू रोपण
Polyurethane कोटिंग: प्रकार, विशेषताहरु, आवेदन
रूस को स्थान विश्व अर्थव्यवस्था मा
मृगौला nephrosclerosis ( "अनुबंधित मृगौला"): कारण, लक्षण, लक्षण, निदान र उपचार
Kubinka, पैट्रियट पार्क: कसरी त्यहाँ पुग्न र के हेर्न सकिन्छ
तपाईं आफ्नो जन्मदिन लागि एक मान्छे के दिन सक्छ?
उच्च व्यावसायिक शिक्षा: राष्ट्रीय मानक